Somaliland oo eriday sharikad caalami ah - BBC Somali
Somaliland oo eriday sharikad caalami ah
22 Maajo 2011
Image caption Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo
War ka soo baxay galabta Xafiiska madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud siilaayo ayaa lagu caddeeyay in haamaha shidaalka ee Berbera maamulkoodii laga wareejiyay
Sharikadda TOTAL Oil Mer Rouge oo maamuleysay hamahaasi muddo dhawr iyo toban sano ah.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo wuxuu warkaasi ku sheegay in maamulkii haamaha keydka shidaalka ee Berbera dib loogu soo celiyay laga bilaabo maanta dowladda Somaliland iyadoo uu madaxweynuhu u magacaabay guddi uu madax u yahay wasiirka ganacsigu, kana mid yihiin wasiirka arrimaha Dibedda iyo guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Somaliland.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in guddigaasi ay sugi doonan oo diiwaangelin doonaan dhammaan hantida halkaasi taalla, wasaaradda ganacsiguna tahay midda maamuli doonta haamaha shidaalka.
Warkaasi waxaa lagu sheegay in wixii xisaab ah ay isaga yimaadaan Somaliland iyo sharikadda TOTAL Oil Mer Rouge, wixii xisaab ahna lagu wareejiyo baanka dhexe ee Somaliland, shaqaalahana xuquuqdoodana ay la waeegtay dawladdu laga bilaabo go’aankan, wixii horena ay ku leeyihiin sharikadda TOTAL.
Waxaa kaloo lagu sheegay warkan in gudidu ay samayn doonaan tartan xor ah iyo qandaraas furan oo lagu tartamaayo, inta ka horreysana guddigu gacanta ku hayn doono haamaha shidaalka ee Berbera.
Warkan madaxweynaha waxaa lagu sheegay in madaxweyne Axmed Siilaanyo u cuskaday baabi’inta heshiiskii Sharikada TOTAL Oil Mer Rouge ku maamuleysay haamaha keydka shidaalka ee Berbera
Xeer madaxweyne oo uu manta soo saray.
Wuxuu sheegay Madaxweynuhu inuu arkay in la baal maray axdi qarameedkii 1993kii iyo distoorka Somaliland, golaha wakiilladuna diideen ansixintii heshiiskaasi, in heshiiskii aan la dhammaystirin iyo in sharikadda Total ka baaqsatay inay dayactirto dhammaan haamaha shidaalka ee dekedda iyo madaarka Berbera isla markana aanay jirin wax maanta u yaalla oo qalab ah haddii cilladi timaado.
Waxaa kaloo warkan madaxweynuhu ku sheegay in sharikadda Total ka baaqsatay inay keento shidaal muddo laba sano ah ku siman iyadoo ay ahayd inay keento shidaal sida uu qeexaayo qodobka 2aad ee heshiiska u dhexeeyay sharikadda iyo Somaliland.
Madaxweynuhu wuxuu kaloo ku sheegay warkiisan in sharikadda TOTAL Oil Mer Rouge laga waayay xisaab celin cad oo ku saabsan hantida gashay meesha iyo in sharikaddasi wareejisay saamiyadii sharikadda iyadoo aanay u dhammaystirneyn sharciyaddii looga bahnaa inay ka helan Qaranka Somaliland.